20 Responses to “လှအိုးကွဲ”
dar lay kike loon lo comment yayae par mal so ma..
zawgyi font bar pyit lei ma ti taw buu Chawww ..
sorry.. I'll come back later :((
အစ်မရေ။ သင်္ကြန်မတိုင်မီပျော်စရာလေးပေါ့။ လှအိုးကွဲရဲ့ အဖြစ်က တော်တော်ရယ်ရတယ်။ လှချင်ပေမယ့် အခြေအနေအချိန်အခါ နေရာဒေသ ကြည့်ဖို့လည်းလိုသေးတာပေါ့နော်။ အဟိ
ဟားဟားဟား ..ရယ်ရတယ်ဗျိုး ။
ပြုံးပြီး ကွဲတဲ့ ထိ ရယ်မိတယ် ..
လှအိုးကွဲ က အိုးပဲ ကွဲလို့တော်သေးတာပေါ့ နော် ...
လှအိုးကွဲ အဖြစ်မျိုးကြုံဖူးတယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်။ သူများဖြစ်တာ။ ငိုရအခက် ရယ်ရအခက်နော်။
အင်း... ရွာ တွေ မှာ အဲ့ ဒီလို လှအိုးကွဲ တွေ အများ ကြီး ရှိနေအုံးမှာပါပဲ။
ဖတ်ပြီးတော့ကြည်နူး မိပါတယ်။ ရွာဓလေ့ ကို လဲ မြင်မိပါတယ်။
သင်္ကြန် မှာ ပျော်ရွှင် ကြည်နူး နိူင်ပါစေ ဗျား..။
ရွာရဲ့ အလှကွင်းက နောက်ဆုံးတော့ လှအိုးကွဲလေးဖြစ်သွားရတယ် :)
ပိုစ့်လေးကို ပြုံးပြီး ဖတ်သွားရပါတယ် ချောရေ.. ကွမ်းတောင်ကိုင်ဘ၀ လှအိုးကွဲလေး ဖြစ်ရရှာတယ်။ ရေးလည်း ရေးတတ်ပါ့နော်။
နှစ်သစ်အတာသင်္ကြန်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ချောရေ...။
သင်္ကြန်မတိုင်မီပျော်စရာလေး၊ တော်သေးတာပေါ့ အိုးပဲကွဲလို့၊ ဖတ်ပြီး ပြုံးရယ်မိပါသည်၊
ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ပေါ့ ပျော်ရွှင်သော သင်္ကြန်ဖြစ်ပါစေ၊
လှ အိုးကွဲ လေး......ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
ရယ်ရတယ်။ လှအိုးကွဲက မချောကိုယ်တိုင်တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။ ဟဲ ဟဲ။ စတာပါဗျာ။
ဒါနဲ့...ပရိတ်အိုးကို အဲဒီလိုကိုင်ပြီး အလှူလှည့်တာမျိုးက တစ်ခါမှ မကြုံဖူးဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ။ အိုးထဲမှာတော့ ပရိတ်ရေအတွက် ရေထည့်ထားပုံမရဘူးနော်။
ဒီစာကို ကျွန်တော့်အမတစ်ယောက်ကို ပေးဖတ်အုံးမှပဲ
သူကလည်း တအားလှချင်တာ သူပြောတာတော့ နဂိုရှိလို့ နဂိုင်းထွက်တယ် ဆိုလားပဲ။
လှချင်လွန်းတော့ အရှက်တကွဲဖြစ်ရတာတွေ များပါ့။ လှတဲ့သူက ပို လှချင်တာပါပဲ။
လှအုန်းမယ် ပြီးရင် ချောအုန်းမယ် အကြောင်း ဆက်ရေးပါ
ဘာကွ. . .အပေါ်က လူ. . .
ဘာချောအုန်းမယ် အကြောင်း ရေးရမှာလဲ. .
ဒါ. . .ချောအုန်းမယ် ပဲလေ. . သူဆိုတာ လူသိမှာ စိုးလို့ သူများ လိုလိုနဲ့ နာမည်ပြောင်းထားတာ. . .ငါနော် ပြောလိုက်ရင် ပေါ်ကုန်တော့မယ်။
မပြောချင်ဘူး . . မပြောဘူးဆို ပြောကို မပြောချင်ဘူး . . .
လှအိုးကွဲ အကြောင်းလာဖတ်ပြီး ရီသွားပါတယ်
သောက်ရှက်ကိုကွဲ”..... ဆိုပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ ပေါက်ကရလျှောက်အော်ဆိုခဲ့တာတောင် သတိရသွားတယ်.......း))
ရွာဓလေ့ကတော့ချစ်စရာ ပဲ ဗျ ........ ဘာပဲပြောပြောကြည်နူးစရာ ကောင်းတာတော့အမှန်ပဲ ဗျာ .......
အော်...လတ်စသတ်တော့ ငါ့အစ်မရဲ့ ငယ်နာမည်က လှအုန်းမယ်ကိုးးးးးးးးးးး (ဟိဟိ...လစ်ပီ)
မချောရေ.. သိပ်လှရင် အိုးကွဲတတ်တယ်ဆိုတာဒါကိုကြည့်ပြောကြတာနေမယ်ထင်တယ်နော်...။